Krosy malefaka amin'ny karaoty sy voasary - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
menaka34 minitraOlona 2
Izao dia toa tonga ihany izany amin'ny farany lavoFotoana hikarakarana kely ny tenanao izao ... tsy mety ve ny manao azy amin'ny crème miaraka amin'ity loko mahery ity?
Raha heverintsika ihany koa fa tena mora miaraka amin'ny Thermomix® ary feno karotenina sy beta-carotene, flavonoids, vitamina A ary E… inona no andrasana amin'izany?
La karaoty manome anao a tsiro mamy somary mifanohitra amin`ny asidra ny voasary. Tena tsara raha te hanaitra zava-baovao ianao. Ny marina dia mankaleo ny anana ary lany tamin'ny tantara!
Inona avy ireo fitambarana tianao indrindra?
1 Krosy malefaka amin'ny karaoty sy voasary
Krema misy loko mahery sy tsiro mifanohitra izay ho tianao.
Fotoana manontolo: 34M
Karaoty 225 g
Ny ranom-boasary 2
Apricot maina 3 notampohan-drano
6 kofehy safrona
Ny voan'ny voaroy voaroaka
Siramamy 1 pinch
Menaka 20 g
Kikisana ary tapaho tsy dia lehibe loatra ny karaoty ary apetraho ao anaty vera miaraka amin'ny apricot maina voatetika, ny tongolo gasy, ny safrona, ny voan-kardamoma ary ny siramamy.
Torotoro izahay mandritra 4 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Ampio ny 20 g ny menaka ary endasina ho 6 minitra, 100º amin'ny hafainganan'ny sotro.
Rehefa tapitra ny fotoana dia asiana ranom-boasary makirana ary asiana tsiro. Manafana azy izahay 2 minitra amin'ny 100º ary ny hafainganam-pandehan'ny sotro.
Ampio rano handrakotra ny legioma sy ny fandaharana 25 minitra, 100º, hafainganana sotro.
Rehefa tapitra ny fotoana dia avelantsika hihena kely ny vera ary avy eo nototoina 1 minitra miaraka amin'ny hafainganana mandroso 5-7-9.
Ny voan'ny kardamôma dia azo esorina fa avy eo dia manoro hevitra anao aho mba hameno azy amin'ny nutmeg, mace na poivre kely.
Raha tianao ny crème matevina dia azonao atao ny mampihena ny habetsahan'ny rano.
Raha tianao ny crème be dia be dia ampio ranon-javatra bebe kokoa fa tsy mahatratra ny litatra raha tsy izany dia ho rano.
Fanazavana fanampiny - Rueblitorte na karaoty sy almond mofomamy
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Lasopy sy menaka, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Lasopy sy menaka » Krosy malefaka amin'ny karaoty sy voasary
Tena original! Hotsapainay 🙂
holazainao amiko ny fandehany!
Salama publication compi! Tena tiako ilay hevitra. Mpankafy menaka fanosotra aho, ka ity iray tena izy ity dia tena tiako io, indraindray miraikitra aminy foana isika ... ary amin'ireo mangatsiaka ananantsika ankehitriny ireo, tsara ho ahy izany. Hotsapaiko izany ary holazaiko anao hoe manao ahoana izany. Oroka.
Salama Irene !!
Faly be aho fa tianao. Ny marina dia zavatra mitovy amiko no mitranga amiko… Izaho dia miafara amin'ny fanomanana ireo fomba fahandro mitovy foana, ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny hanandrana zava-baovao aho.
Ny crème dia malefaka be ary misy fifangaroan'ny tsiro, ho an'ny tsiriko, idealiko!
Beset 1 matavy !!
Aiza no ahazoanao masomboly kardamôma? Tsy misy akora toa azy ve? Misaotra !!
Amin'ny ankabeazan'ny tsenan-tsakafo dia mazàna no misy kiheba misy zava-manitra ahafahanao mividy dipoavatra, safrona ... satria any izy ireo dia tena hanana kapulaga.
Izy io dia azo soloina amin'ny karazana tianao indrindra, ny filamatra dia ny manome sentra mifanohitra amin'ny crème nefa mazava ho azy fa samy manana ny heviny avy ny spice tsirairay.
Salama!! Manaraka anao aho amin'ny fahalianana be sy amin'ny fomba fahandro maro izay avoakanao, matetika no ataoko.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoan'ny chestnuts dia azonao atao ny mametraka recette ho an'ity vokatra mahafinaritra ity. Ankoatry ny hena na tsindrin-tsakafo dia tena liana aho hahafantatra ny fomba fanaovana CHESTNUTS IN SYRUP ary indrindra ny EL MARRON GLASE. Afaka manampy ahy ve ianao? Tsy nahita na inona na inona aho tao amin'ny bokinao.
Faly izahay mahafantatra fa ny zazalahy dia ampirisihina koa handro amin'ny Thermomix ... tsotra be izany, sa tsy izany?
Mikasika ireo tratran-tratra ... zaza mifatotra efa miomana amin'ny Krismasy isika fa hisy zavatra hitranga amintsika!
bera gummy dia hoy izy:
Mikasika ny fomba fahandro, azafady milaza aminao fa tsy tianay izany.
Ny mariky ny voasary dia sahy loatra ary tsy nilalao tsiro.
TSY MIERITRERETY HO HIVERINA INDRAY ISIKA. "MALAHELO".
Mamaly an'i gominolo
aza manahy! Mety ho natahotra kokoa aho raha tsy nivoaka ny fomba fahandro, fa raha ny momba ny tsiro dia tsy hifamaly aho ... fifangaroana sahisahy no ananan'izy ireo fa tsy natao ho an'ny palata rehetra !!
Miala tsiny aho fa nanao an'ity crème ity androany hariva ary tsy maintsy nariako… Tsy tianay mihitsy, tsiro volomboasary be loatra ary jereo fa tianay ny fomba fahandro misy tsiro mifanohitra… Misaotra anao ihany tamin'ny nandefasana ny fomba fahandro!
Mayra !!! Omaly no nataoko ary tena tiako ilay izy, ny nataoko ihany koa dia ny nametahana karazana karaoty masaka ho haingo ary faly ry zareo. MISAOTRA
oh Jorge… tsy fantatrao ny hafaliako !!!
Tena tiako ny hevitrao… Adikao io!
Misaotra betsaka !!
Ny apricots maina dia apricots maina. Amin'ny resipeo sasany, toy ity dia tsy maintsy alentikao izy ireo mba hahazo vatana kely satria tsy ampy rano.
Azo hanina izy ireo rehefa tonga, manadala ahy !!
Mifalia amin'ny zaza !!